အမျိုးအစား: ပန်းချီ, Drawing
Boris Valeggio များ၏ရုပ်ပုံများလိုပဲ။ အမှုတော်တို့ကို၏ဘယ်ဟာအကောင်းဆုံးကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရနိုင်သနည်း မိမိအအတ္ထုပ္ပတ္တိ၏မှတ်သားလောက်? Boris Valedzho (Boris Vallejo) သူ၏ဖခင်တစ်ဦးအောင်မြင်သောရှေ့နေရှိရာ, Lima အတွက် (ပီရူး) မွေးဖွားခဲ့သည်။ ...
19 ရာစုမှပုံတူပန်းချီဆရာများနှင့် 1-Jose Maria Maria Velasco 1840-1912 ရှုခင်းပန်းချီဆရာ - မက္ကဆီကန်လက်ရာများ2Aleksey Tyranov 1808-1859 ပုံတူပန်းချီဆရာ 3-Isaac Levitan 1840-1900 ပုံတူပန်းချီ XNUMN-XNUMN-XNUMN Vasily Petrovich Vereshchagin-4-1865 ပုံတူပန်းချီဆရာနှင့်ပန်းချီဆရာ 1911-Vasily ...
Van Gogh ၏ပန်းချီကားသည် Ravens နှင့်အတူသယ်ဆောင်ထားသလား။ ငါပန်းချီကားကိုမကြိုက်ဘူး၊ ဒါပေမယ့်ဘာကြောင့်အဲဒါဟာဈေးအကြီးဆုံးလဲ
Van Gogh ၏ပန်းချီကားသည် Ravens နှင့်အတူသယ်ဆောင်ထားသလား။ ငါပန်းချီကားကိုမကြိုက်ဘူး၊ ဒါပေမဲ့ယူကရိန်းရဲ့ဈေးအကြီးဆုံးအလှဆုံးအလံဟာဘာကြောင့်လဲ။ နောက်ဆုံးနှင့်တစ် ...
ရုရှားအနုပညာရှင်? ကအကျော်ကြားဆုံးမှနှစ်လိုဖွယ်ပါ! ကျေးဇူးပြုပြီးရေးရန်: ရုရှအနုပညာရှင်, ကောင်းစွာ, သူတို့ရဲ့အမည်များအမည်များဖြစ်ကြသည် !!! ရုရှားအဆိုတော်များ XVIII ရာစု link ကိုစီမံကိန်းရုရှားအနုပညာရှင် 19 http://www.art-portrets.ru/hudojniki_19_veka.html ရာစုဂရိတ်အဆိုတော်များ၏အုပ်ချုပ်ရေး၏ဆုံးဖြတ်ချက်များကပိတ်ဆို့နေသည် ...
ဘယ်လိုနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်တစ်ပုံစံတည်းစက္ကူ toned ဘယ်သို့ရနိုင်သနည်း စက္ကူများလွန်းကြီးစွာမပါလျှင်အကောင်းဆုံးရေမြှုပ်ကြောင့်ပိုမိုလွယ်ကူခြင်းနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်မြန်ဆန်င် !!! :-)) Toning စက္ကူအချို့အရောင်တန်ဖိုးများ၏ရွေးချယ်ရေးနှင့်အတူစတင်ခဲ့သည်။ ...
မည်မျှခန်း Tretyakov ပြခန်းရှိပါတယ်, နှင့်ဘာ Tretyakov ပြခန်း 106 ခန်းမထဲမှာငွေကောက်ခံပြခန်းပန်းချီ, ပုံဆွဲ, ပန်းပုနှင့် iconography သို့ခွဲခြားထားတယ်။ built 62 ခန်းအတွက်ရုံးချုပ် Lavrushinsky လိန်း, ထိတွေ့မှု ...
အဆိုပါ Impressionist ၏ရုရှားအနုပညာရှင်? အမှန်ဆိုသည်ကား, ဖြစ်ကောင်း, သာ Korovin ။ ဒီတစ်ခါလည်းအခြား Borisov-Musatov, Lancer ။ Petrovsky-Rakinton ရုရှား impressionism ကုဒ်-အမည်ရှိ XX ရာစုနှောင်းပိုင်း XIX အစအဦး၏ရုရှားအနုပညာရှင်များအကျင့်ကိုကျင့်။ ရသောသူတီထွင်ဖန်တီးမှုများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုပြောကြားခဲ့့သည်က ...
Francisco Goya "သူပုန်တွေကိုမေလ31808 ညမှာပစ်ခတ်မှု" ပုံကိုဖော်ပြပါ
Francisco Goya Ahhhh3မှမေလ 1808 တွင်မေလ2ညတွင်သူပုန်များပစ်ခတ်မှုကိုရုပ်ပုံဖော်ပြပါ။ မက်ဒရစ်ရှိမျိုးချစ်စိတ်ဓာတ်ဆိုင်ရာဖျော်ဖြေမှုကိုစပိန်ကိုသိမ်းပိုက်ထားသည့်ပြင်သစ်တပ်များကရက်ရက်စက်စက်နှိမ်နင်းခဲ့သည်။ ချက်ချင်း ...
ဂီတပန်းချီကားကဘာလဲ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ရေပန်းစားပေမယ့်ဂီတကိုရေဒီယို၊ ရုပ်မြင်သံကြားနဲ့ရုပ်ရှင်ရုံတွေမှာနေ့စဉ်ဖွင့်ပေးပါတယ်။ မမြင်ရတဲ့၊ ငါတို့က ...
အဆိုပါတက်တူးထိုး Palma အဘယ်အရာသနည်း ငါငါ့ဘို့တွေအများကြီးကိုဆိုလိုသည်, သူမ၏လက်ချောင်းပေါ်မှာကိုယ့်ဟာကိုယ်တက်တူးထိုးစေချင် ...
အဆိုပါတက်တူးထိုး Palma အဘယ်အရာသနည်း ငါငါ့အဘို့ကတစ်ဦးထက်ပိုတန်ဖိုးကို Tattoo Palm ထူးခြားဆန်းပြားအပင်ကိုအဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အချက်ကိုဝမျးမွောကျသောစိအောင်ခြင်း, ဘုန်းအသရေသင်္ကေတ ... တွေအများကြီးကိုဆိုလိုသည်, သူမ၏လက်ချောင်းပေါ်မှာကိုယ့်ဟာကိုယ်တက်တူးထိုးစေချင် ...
နဂါး .. .. Smagd သာဒိ, ကျောက်တို့အဘယ်အရာကိုမျိုးလဲ အဘယ်အရာကိုအရောင်? သူတို့ဘာကိုဆိုလိုပါသလဲ
နဂါး .. .. Smagd သာဒိ, ကျောက်တို့အဘယ်အရာကိုမျိုးလဲ အဘယ်အရာကိုအရောင်? သူတို့ဘာကိုဆိုလိုပါသလဲ Libra, Virgo, Gemini ၏နိမိတ်လက္ခဏာနဂါး (နဂါး) အဖိုးတန် kamen.Podhodit ။ silicates နည်ကျောက်, ရောင်စုံကျောက် agate နှင့်ထံမှကွဲပြားခြားနားသော ...
Alle Alphonse သည်“ နက်ရှိုင်းသောဂူတွင်းရှိလူမည်းတို့၏တိုက်ပွဲ” ပန်းချီကားကို Vivien ပြခန်းတွင်ပြသခဲ့သည်။
Alle Alphonse သည်“ နက်ရှိုင်းသောဂူတွင်းရှိလူမည်းတို့၏တိုက်ပွဲ” ပန်းချီကားကို Vivien ပြခန်းတွင်ပြသခဲ့သည်။ ဒါကကျောင်းတစ်ခုလုံးလား၊ ဒါမှမဟုတ်အသစ်ကမေ့နေတဲ့အဟောင်းပဲ ပြင်သစ်လူမျိုးကနောက်ပြောင်သည်။
နှင့်မည်သို့ gouache နှင့်အတူတစ်စိမ်းအရောင်ဖန်တီးနည်း , အစိမ်းအပြာ, အဖြူ ... .. စိမ်း .. ငါပြုရှုပ်ထွေးပါလိမ့်မယ်။ စမ်းသပ်မှုနှင့်သင်အဝါရောင်၏အပြာရောင် ... နည်းနည်းအတွက်အောင်မြင်ဖို့ပါလိမ့်မယ်။ ဖြစ်ကောင်းနည်းနည်းပိုပြီး ...
ကျေးဇူးပြုပြီး“ ကြောင်ပရဒိသု” manga ကိုလင့်ခ်ချပြီး Vanilla နှင့် Chokola တို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ကျေးဇူးပြုပြီး“ ကြောင်ပရဒိသု” manga ကို link တစ်ခုချပြီး Vanilla နှင့် Chokola ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ငါ chocola ကိုသဘောကျတယ်။ မေးခွန်းအပိုင်းကအတူတူမဟုတ်ဘူး။ Vanillin နှင့် Chakolin (သို့) တစ်ခုခု))) http://animult.net/mangas/cat-paradise Manga Gakuen Sousei ...
ခရမ်းရောင်နဲ့ခရမ်းရောင်၊ ဒီအရောင်တွေကဘာတွေလဲ။ ဘာလဲ ဤရွေ့ကားကွဲပြားခြားနားသောအရောင်များများမှာ! ခရမ်းရောင်ဟာ lilac နဲ့တူတယ်။ သို့သော်ခရမ်းရောင်နှင့် lilac တို့သည်တူညီသောအရောင် (ပန်းရောင်) ကွဲပြားခြားနားသည်။
သင်သည်အဘယ်သို့လမ်းပေါ်ကအနုပညာဒီလိုမျိုးခေါ်သနည်း ... လမ်းပေါ်အနုပညာ, ရေးခွသို့မဟုတ်ဖျက်ဆီး :) ရာဖီတီပန်းချီ, အလားတူစတိုင်ဘဏ်များထားပါတယ်။ ဂရက်ဖတီဖီတီပန်းချီ -vypolnennye အပြစ်တွေ။ နှင့်သင်၏အိမ်ရှိနံရံသို့မဟုတ်ရေးခွအပေါ် drawings ...
ပန်းချီကား "Crying Boy" ပန်းချီကားကိုသူမဘာသိထားလဲ။ ယခုနှစ် 1985 အလယ်တွင်ဂရိတ်ဗြိတိန်တစ်ခွင်၌မီးဘေးနှင့်ပတ်သက်သည့်သတင်းစာများ၏ရှေ့စာမျက်နှာများကိုစွန့်ခွာ။ ထူးဆန်းစွာအသက်ရှင်ကျန်ရစ်ခဲ့သည်။
ပုံတူနှင့်ကဗျာ။ ကျေးဇူးပြုပြီးဓာတ်ပုံနှင့်ကဗျာပေါင်းစပ်ပါ။ အမည်နှင့်စာရေးသူအေ Pushkin“ Zhukovsky ၏ပုံတူ” ကျွန်ုပ်သည်လူကြီးမဟုတ်၊ ငယ်လည်းငယ်သည်၊
အနီရောင်သည်အဝါရောင်သို့မဟုတ်အနီရောင်လား? နီအနီရောင် - အနီရောင် နီနီရောင်နီ။ အနီရောင် (အဝါရောင်ထက်အဝါရောင်ထက်နီရဲသောအနီရောင်နှင့်အတူ: 1) ကြိမ်မြောက်၊ 1 ။ ခေတ်ကုန်ပြီ နီနီ၊
သူသည် Monet Lisa Leonardo Da Vinci ၏နှုတ်ခမ်းများကိုသာမည်မျှဆွဲချခဲ့သနည်း။ Leonardo မှာ Titi ရှိလား။ လီယိုနာဒိုဒါဗင်ချီသည် 12 နီးပါးနှစ်ပေါင်းများစွာနှုတ်ခမ်းများ Mona ကိုပန်းချီဆွဲကာသုံးစွဲခဲ့သည်။
14 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,293 စက္ကန့်ကျော် Generate ။